Warbixin dheeraad ah oo laga helo kuwo kale | IVO.se
Waxaad halkaan ka heleysaa meelo laga la xiriiro boggaga internet ee hay’adaha iyo ururada aad ka heli karto warbixino ku xiisagelin kara.
Filimo ku hadla luuqado kala duwan oo loogu talagalay dhallaanka keligood yimid oo deggan guryaha HVB
Filimada Socialstyrelsen oo ku hadla luuqado kala duwan oo loogu talagalay dhallaanka keligood yimid oo deggan guryaha HVB
Filimo ku hadla luuqado kala duwan oo loogu talagalay dhallaanka keligood yimid oo qoysaska lala dejiyey
Filimada Socialstyrelsen oo ku hadla luuqado kala duwan oo loogu talagalay dhallaanka keligood yimid oo oo qoysaska lala dejiyey
Koll på soc waa bog uu ku qoran yahay warbixino ku saabsan adeegga bulshada ee carruurta iyo dhallinyarada. Waxaad halkaas ka akhrisan kartaa waxyaalaha ay hay’adda adeegga iyo caafimaadka bulshadu qabato iyo sida looga heli karo caawimaad iyo taageero.
Jag vill veta/Waxaan doonayaa inaan ogaado
Waxaan doonayaa inaan ogaado waa meel aad ka akhrisan karto waxa dembi noqon kara, waxa la dareemi karo haddii qayb laga ahaa fal dembi iyo caawimaadda la heli karo.
Barnombudsmannen (wakiilka carruurta) waa hay’ad dowladeed oo ay shaqadeedu tahay inay wakiil ka noqoto ilaalinta xuquuqda iyo danaha carruurta iyo dhallinyarada sida waafaqsan Qaraarka Qaramada Midoobey ee xuquuqda carruurta.
BRIS - Xuquuqda carruurtu ku leedahay bulshada dhexdeeda
BRIS waxay ka shaqaysaa hagaajinta shuruudaha iyo xuquuqda carruurta iyo dhallinyarada. Waxaad halkaan ka waci kartaa ama e-meyl uga diri kartaa ama kala sheekeysan kartaa lataliye ka shaqeeya BRIS ama la sheekeysanaya dad aad isku da’ tihiin ama ka akhrisanaya maaddooyin muhiim ah.
Khadka caawimaadda ee Rädda Barnen
Rädda Barnen waa urur ilaaliya xuquuqda carruurta oo ka shaqeeya in dhammaan carruurtu ay helaan xuquuqdooda. Rädda Barnen wuxuu leeyahay khad iyo telefoon lagu caawino dhallaanka keligood yimid.
Maskrosbarn waxaa loogu talagalay carruurta ay waalidkood khamriga aad u cabbaan ama daroogada isticmaalaan ama madaxa ka bukaan.
Dagsattprataom waa bog sare u qaadaya aqoonta loo leeyahay faraxumaynta carruurta. Hadafku waa in carruurta laga difaaco faraxumaynta iyo in carruur badani ay sheegaan haddii la faraxumeeyey oo ay caawimaad helaan.
Xuquuqda dadka HBTQ ee Iswiidhen, Hay’adda arrimaha dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah
Boggaan waxaa loogu talagalay dadka dhallinta yar oo dhowaan yimid Iswiidhen. Waxaad halkaan warbixin ku qoran afaf kala duwan.
Boggaga carruurta ee 1177
Barta 1177 vårdguiden waxaa ka heleysaa talooyin ku saabsan meesha aad la xiriiri lahayd haddaad maskax ahaan isku buuqsan tahay oo aad dooneyso inaad la xiriirto goobaha caafimaadka ama xafiiska adeegga bulshada.
UMO waa bar internet oo loogu talagalay dadka da’doodu u dhexeyso 13 ilaa 25 sano. Barta UMO waxay jawaab kaa siineysaa su’aalahaaga ku saabsan galmada, caafimaadka iyo xiriirka.
Dina rättigheter waa bar internet oo ka warbixisa xuquuqda carruurta ama dhallinyarada.
Kooxda Aqoonxirfadeedka Qaranka
Waxaad halkaan ka akhrisan kartaa warbixin ku saabsan cadaadiska iyo xoog-isticmaalka la xiriira sharafta qoyska.
Caafimaad-darrada maskaxda dhallaanka
Hay’adda arrimaha dhallinyarada iyo bulshada rayidka ah waa bar internet oo aad ka daawan karto filimo gaagaaban oo ay matalayaan dhallinyaro kuna saabsan caafimaad-darrada maskaxda.
112 waa telefoon waci karto haddaad u baahan tahay gargaar degdeg ah.
Statens institutionsstyrelse (SiS) waa hay’ad dowli ah oo ka shaqaysa in daryeel iyo daaweyn khasab ah la siiyo dhallinyarada qabta cuduro xagga maskaxda iyo dad waaweyn oo isticmaala maandooriye.